Indlu enokubukwa okumangalisayo eMaratea - I-Airbnb
Indlu enokubukwa okumangalisayo eMaratea
Tortora Marina, Calabria, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Emanuela
Ifulethi elinethala elihle elibheke ulwandle lapho ungakhululeka khona, ubuke umkhathizwe, futhi uchithe izinsuku ezishisayo zasehlobo "ngaphandle". Ithala linakho kokubili i-attic kanye nevulandi enamathayela lapho ungakwazi khona
dla "ukukhanya kwekhandlela" futhi ujabulele umbukwane wenyanga obonakala olwandle ezungezwe ukuthula okufudumele. Ifulethi linombhede o-kabili ongu-1, umbhede ongusofa ongu-1 kanye negumbi eli-1 "elinombhede owumbhede" futhi lifakwe ngendlela "yasolwandle". Kungamakhilomitha angu-2 kuphela ukusuka olwandle.
Ishawa yangaphandle ikuvumela ukuthi uchithe izinsuku eziningi zasehlobo ezishisayo ungaphandle. Kuwo wonke amagumbi endlu ungajabulela ukushona kwelanga okuhle nokubuka okuhle.
Kungenzeka ukwenza uhambo losuku oluya e-Matera (inhloko-dolobha yesiko laseYurophu 2019) njengoba uhamba ngamahora angu-3 ngemoto, uwela indawo ekhangayo yasendle "i-Pollino National Park". Eduze kukhona ihhavini (engaphansi kwamamitha angu-50) elibhaka isinkwa esishisayo namakhekhe nganoma yisiphi isikhathi emini noma ebusuku.Indlu itholakala 5 min. kusukela olwandle nasesigodini sasendulo esihle se-"Tortora vecchia", lapho ungadla khona ezindaweni zokudlela ezizojabulisa ngisho nolwanga oludinga kakhulu. E-"Parco del Pollino" abathandi bemvelo bangathatha uhambo olude emvelweni "yasendle futhi engangcolisiwe", bawele imifula, bahambe nge-rafting noma, mhlawumbe, izinyamazane nezimpisi.
Uzokwamukelwa ngokufudumele endaweni ephumuzayo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Tortora Marina namaphethelo